Tansaaniya - Midabada buluugga ah iyo noocyada kala duwan ee joisite - Trichroism xoogan - Video
Ka iibso macdanta "tanzanite" dabiiciga ah dukaankeena
Tansaaniyadu waa buluug iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo jilicsan oo ka mid ah jasiiradda macdanta. Iyadoo la tixraacayo kooxda epidote. Gacanta waxaa lagu ogaaday Manuel d'Souza ee 1967. Degmooyinka Merelani ee gobolka Manyara, waqooyiga Tansaaniya. Dhowaan magaalada Arusha iyo Mount Kilimanjaro. Ilaha keli ah ee Tansaaniya ayaa sidoo kale ku jira Tansaaniya. Meel aad u yar oo macdan ah. Qiyaas ahaan 7 km dheer iyo 2 oo gaari ballaaran. Dhowr hoyga Mirerani.
Tikidhada xooggan ee xooggan ayaa laga arki karaa Tansaaniya. Waxay u muuqataa midab buluug ah, iyo sidoo kale violet. Burgundy waxay kuxirantahay jihada culeyska. Waxay sidoo kale u muuqan kartaa si ka duwan marka la eego xaaladaha nalalka kale duwan. Muraayadaha ayaa u muuqda kuwo muuqda marka ay ku jiraan iftiinka ifilada. Muraayadaha casriga ah si fudud ayaa loo arki karaa marka lagu soo rogo iftiiminta iftiinka. Gobollada adag ee tanzanite mararka qaar waa guduud. Daaweynta kulaylka, waxaa suurtogal ah in laga saaro midabka midabka leh. Waxay ugu dambeyntii keenaysaa buluugga buluug ee dhagaxa.
Manuel d'Souza, oo ah tafaariiq iyo quruxda dahabiga ah ee ku nool Arusha ee Tansaaniya. Wuxuu helay jajabyo hufan oo buluug ah oo buluug ah iyo buluug ah oo buluug ah oo ku yaala meel u dhow xeebta Mirerani. Ku saabsan 40 koonfur bari ee magaalada Arusha. Wuxuu u malaynayay in macdanta ay ahayd peridot. Laakiin markii ugu dhakhsaha badan la ogaaday inuusan ahayn, wuxuu ku soo gabagabeeyey inay ahayd dumarreite. Wax yar ka dib, Yooxanaa Sawlos wuxuu arkay dhagaxyada. Noole-yaqaan ku-xigeenka cilmi-baarista ee Nairobi.
Shirkadda Gemstone oo ka dibna ka qodaysay aquamarine gobolka ku yaala Mount Kenya. Suuf, oo markii dambe ka helay muraayad caan ah oo ku taala aagga Tsavo ee Kenya. Wuxuu ka takhalusaa dumarka iyo cordierite sida fursadaha. Oo wuxuu u diray aabbihiis. Hyman Saul, madaxweyne kuxigeenka Saks Fifth Avenue ee magaalada New York.
Hyman Saul ayaa shaybaarka ku soo qaaday waddada. Ku aaddan Machadka Cilmi-baadhista ee Ameerika. Ugu dambeyntii waxay si sax ah u cadeeyeen muraayadda cusub sida macdanta kala duwan.
Aqoonsiga saxda ah waxaa sameeyey makhaayadaha jaamacada Harvard. Sidoo kale Matxafka Ingiriiska, ugu danbeynna Jaamacadda Heidelberg. Laakiin qofkii ugu horeeyay ee hela aqoonsiga xaqu waxa uu ahaa Ian McCloud. Jihaad-bixiye dawladeed oo Tansaaniya ah kuna salaysan Dodoma.
Cilmi-baaris ahaan waxaa loogu yeeraa "buluugga buluugga ah". Dhuxul-dhagax waxaa loo magacaabay tanzanite by Tiffany & Co. sababtoo ah waxay rabeen in ay ka faa'iideystaan ​​yaraanta. Iyo meel keliya oo maraakiibta ka mid ah.
Laga soo bilaabo 1967, malaha laba malyan oo carat ah tanzanite ayaa laga qodaa Tansaaniya. Ugu dambeyntii, xukuumadda Tansaaniya ayaa magangelyo siisay 1971.
Toogashada Tansaaniya (Sintent forsterite)
Tags Forsterite, Jiiday, Senttetik, Tanzanite
Ruby ee zoisite